Sylvia Plath. 4 nhetembo dzekupemberera kuzvarwa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Sylvia Plath akaberekwa muna Gumiguru 27, 1932 mu Boston. Nyanduri, akanyorawo zvirevo nezvinyorwa. Aive ne hupenyu hwakaoma, aine matambudziko epfungwa kubva pahudiki hwake uye hunhu hunoshungurudza. Uye magumo ake akaratidzirwa nekurambana nemurume wake. Asi isu tiri kupemberera iyo gore rekuzvarwa kwake uye ndangariro dzakanakisisa kuverenga dzimwe nhetembo dzake. Ndivo vakasanangurwa vangu.
Akatumira yake nhetembo yekutanga uye chete makore masere uye akaramba achinyora nyaya uye ndima dzaakatumira kumagazini akasiyana siyana, izvo zvakamutendera kuti ave nebudiriro yake yekutanga. Pakati-makumi mashanu, uye apo ini ndanga ndichitotambura nezvakawanda kusagadzikana kwepfungwa, akapedza kudzidza paSmith College. Asi asati apfuura nechipatara chepfungwa nekuda kwekuedza kuzviuraya.
Une a Fulbright kudzidza uye aive kuYunivhesiti yeCambridge, kwaakaenderera mberi nebasa rake rekunyora. Ipapo akasangana Ted anombundira, waakaroora naye uye akaita vana vaviri. Asi muchato wakaputsa mumwe kusavimbika yemurume wake. Mumamiriro ezvinhu akadaro, nevana vaviri vari kutarisira, vachirwara uye nemari shoma, iyo kuzviuraya zvakadzoka kuzomutambudza. Uye aine makore makumi matatu chete akatora hupenyu hwake nekudzipwa negasi.
Mabasa ake anosanganisira mazita akadai se Iyo colossus, Kuyambuka mvura, Miti yechando o Iyo bhero chirongo. Yakagamuchira iyo Pulitzer Mubayiro muna 1982, sa afa, yavo Pedzisa nhetembo.
Mushure mekurohwa kweani huni dzinonzwika,
Kubva pakati senge mabhiza.
Inozvimba semisodzi, senge
Zvekugadzirisa girazi rako
Izvo zvinowira nekutendeuka
Makore gare gare
Ndinosangana navo munzira -
Mazwi akaoma asina mutasvi.
Ruzha rusinganeti rwemahwanda.
Kubva pasi petsime, nyeredzi dzakagadziriswa
Dai mwedzi wainyemwerera, zvaitaridza kunge iwe.
Unosiya zvakafanana pfungwa
Yechinhu chakanaka kwazvo, asi chinoparadza.
Vaviri vane hunyanzvi pakukwereta mwenje.
Muromo wake muO unochema nyika. zvako hazvizungunuke,
Uye chipo chako chekutanga kushandura zvese kudombo.
Ndinomuka ndiri muguva; uri pano here,
Kusundira minwe yangu patafura yemarble, kutsvaga fodya
Kubata semukadzi, asi kwete sekutya,
Uye kufa kutaura chimwe chinhu chisingapindurwe.
Mwedzi unodzikisira vanhu pasi,
Asi masikati zvinoseka.
Kusagutsikana kwako, kune rumwe rutivi,
Ivo vanouya kuburikidza nebhokisi retsamba neyakajairwa rudo,
Yakachena uye isina chinhu, inopamhama kunge kabhoni monoxide.
Hakuna zuva rakachengeteka kubva pamashoko pamusoro pako,
Kubudikidza ne Africa, pamwe, asi kufunga nezvangu.
Ini ndingangoda kuve akaenzana.
Ini handisi muti une midzi yakadzika
pasi, kusvina zvicherwa uye rudo rwaamai,
saka zvakare kutumbuka kubva munaKurume kusvika Kurume,
kupenya, kana kudada kweparterre
chena yekuyemura mhere, yakanyanya kupendwa,
uye padhuze, ini handiteerere, yekurasa maruva ayo.
Zvichienzaniswa neni haafi
muti, uye maruva akashinga.
Ndinoda zera reimwe, kushaya hanya kwevamwe.
Manheru ano, mune risingaperi mwenje
dzenyeredzi, miti nemaruva
vakaparadzira kutsva kwavo kukuru.
Ndinofamba pakati pavo, havandione, pandinovata
dzimwe nguva ndinofunga kuti ini hama
kupfuura nakare kose: pfungwa dzangu dzinoenda pasi.
Izvo zvakajairika, kukandwa. Kudenga
uye ndakava nehurukuro yakasununguka, saka ndichadaro
zvinonyanya kubatsira pandakazobatana nepasi.
Muti neruva zvichandibata, ndione.
Ndiri sirivheri uye chaiko. Kusasarura.
Uye yakawanda sei yandinoona ini ndinonwa pasina kunonoka
sezvazviri, kusagadzikana kwerudo kana ruvengo.
Ini handina hutsinye, ndinotaura chokwadi chete:
ziso rakatenderera remwari mudiki.
Kumadziro akatarisana ndinopfuudza nguva
Kufungisisa: pinki, matema. Ndanga ndakamutarisa kwenguva yakareba
icho chikamu chemoyo wangu. Asi inofamba.
Zviso nerima zvinotiparadzanisa
isingamiri. Zvino ini ndiri dziva. Vhara
pamusoro pangu mukadzi, tsvaga kusvika kwangu.
Tendeukira kune iwo ekunyepedzera moto
yemwedzi. Musana wako ndinoona, nokutendeka
Ndinozviratidza. Anondibhadhara nemisodzi
nemasaini. Anotarisira. Anouya oenda.
Chiso chake nehusiku chinotsiva
mangwanani. Ndakanga ndanyudzwa musikana uye ndakura
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Sylvia Plath. 4 nhetembo dzekupemberera kuzvarwa kwake
Iyo mvura inogadzirira